Sheekh caan ah oo xabsi loogu xukumay arrin la xiriirta COVID-19. | Warbaahinta Ayaamaha
Sheekh caan ah oo xabsi loogu xukumay arrin la xiriirta COVID-19.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Wadaadka mayalka adag ee saameynta badan ku leh dalka Indonesia ayaa lagu xukumay afar sano oo xarig ah, kaddib markii uu qariyay macluumaad ku saabsan baaritaanka COVID-19, iyadoo lagu soo eedeyay inuu faafiyay xanuunkaas, kaddib markii uu qabtay kulamo diimeedyo ay iskugu yimaadeen boqollaal qof.
Ciidamada Booliska iyo Militariga ayaa aad u ilaalinayay maxkadda Bariga Jakarta, halkaas oo saddexda garsoore ee maxkamaddaas ay ku xukumeen in Rizeiq Shihab uu ka been sheegay natiijada baaritaankii lagu sameeyay ee COVID-19, taas oo ku adkaatay hay’adaha caafimaadka ee dowladda inay ogaadaan dadkii uu la kulmay iyo goobihii u booqday.
Hay’adaha ammaanka ayaa xiray waddooyinka mara agagaarka maxkamadda, iyadoo kumanaan ka mid ah taageereyaasha Shihab ay isku dayayeen inay dhigaan bannaanbax ay ku dalbanayaan siideyntiisa.